Marka wareegga dahabiga ah uu gudbo qaansoroobaad (hal talaabo ayaa ka imanaya soosaaraha), dhexda bey kasta iyo safka, waxaa jira labo (2) 5-xiddigo fiiqan (36 xiddigood). Wadarta guud ayaa ah 18 + 36 + 1 ama 55 xiddigood. Xiddigaha 55-aad ayaa matalaya 54-ta dowladood ee hadda Afrika ku nool iyo faraca Afrika ee adduunka.
Ayaa u midayn doona samaynta Mareykanka Afrika. Goobaha Dahabka ah waxay leeyihiin qayb “eadem mutata ሬigagogo” qayb ahaan, taas oo ah inay ku dhexjiraan isla egida xarunta O, ee saamiga π iyo xagal π / 2. Sidaa darteed waxay ku wajahan tahay wareegga dhabta ah ee logarithmic leh m qeexay em / 2 = . Sidaa daraadeed isleegyada polar. Calanka USOA wuxuu ka tarjumayaa dhawrista adag ee saamiga rabbaaniga ah. Hawshana natiijada ka soo bixi doonta, waxay u hoggaansan doontaa shuruucda caalamka.